७ सय ४२ आरोही कुन-कुन हिमालमा छन्? « AayoMail
७ सय ४२ आरोही कुन-कुन हिमालमा छन्?
कोभिड–१९ महामारीबीच जारी यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि हालसम्मकै बढी आरोहीले अनुमति लिएका छन्।
पर्यटन विभागका अनुसार सगरमाथाका लागि सर्वाधिक ४३ आरोहण दलका ४ सय ८ आरोही त्यहाँ पुगेका छन्। तीमध्ये ९३ महिला र ३ सय १५ पुरुष आरोही छन्। सन् २०१९ मा सगरमाथा आरोहणका लागि ४१ दलले अनुमति पाएका थिए। सन् २०२० मा बसन्त ऋतुमा आरोहण भएन।
विभागका अनुसार सगरमाथासहित अन्य हिमाल आरोहणका लागि ८५ दलका ७ सय ४२ आरोही सम्बद्ध हिमालमा छन्। त्यसैगरी ल्होत्से आरोहण गर्न १४ दलका ९६ महिला र २९ पुरुष गरी १ सय २५, नुप्त्सेमा ३८ र पुमोरी चढ्न नौ आरोहीले अनुमति पाएका छन्।
त्यस्तै अन्नपूर्ण आरोहण गर्न ४४ र धौलागिरिका लागि पाँच दलका ३३ आरोही गएका छन्। मकालु आरोहणका लागि दुई दलका २०, मनास्लुमा एक दल, तिलिचोमा आठ र हिम्लुङ चढ्न सात आरोही गएका छन्।
विभागका अनुसार अन्नपूर्णमा केही आरोही सफल भएका छन् भने मौसमले साथ दिए केही दिनभित्रै सगरमाथा आरोहण सुरु हुनेछ। अहिले अधिकांश आरोही सगरमाथाआधारशिविरमा छन्। सगरमाथा चुचुरोसम्म बाटो बनाउने आइसफल डाक्टर अहिले चौथो शिविरमा पुगिसकेका छन्।
सगरमाथासहित १९ हिमाल तथा पिक आरोहणका लागि २४ एक्सिपिडिसन कम्पनीमार्फत आरोही गन्तव्य गएका हुन्। वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहणबाट हालसम्म सरकारले ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सलामी दस्तुर उठाइसकेको छ। सगरमाथाबाट मात्रै करिब ६६ करोड रोयल्टी उठेको छ।
कोभिड–१९ महामारीबीच सञ्चालन भइरहेको पर्वतारोहणले मुलुकको पर्वतीय पर्यटन सुरक्षित रहेको सकारात्मक सन्देश विश्वभर प्रवाह भएको विभागको भनाइ छ। (रासस)